Wararka Maanta: Isniin, Jun 7 , 2021-Sirdoonka Maaliyadeed ee Imaaraadka oo heshiisyo Is-afgarad ah la saxiixday Soomaaliya
Ujeedada laga leeyahay heshiiskaan ayaa qeyb ka ah dadaallada is-weydaarsiga macluumaadka maaliyaddeed iyo khibrad wadaaga, si loola dagaallamo dambiyada maaliyadeed ee dalalkaan ka dhaca.
Heshiisyadan, ayaa la kala saxeexday iyada oo la raacayo ujeeddada guud ee Imaaraadku ka leeyahay la dagaallanka lacagaha sharci darrada ah iyo maalgelinta kooxaha argagixisada, waxayna waddamadu hoosta ka xariiqeen is-weydaarsi sirdoon labada dhinacba faa’iidada u leh.
Heshiiskan waxaa Imaaraatka u saxiixay Ali Faisal Ba’Alawi, madaxa sirdoonka maaliyadda UAE. Soomaaliya waxaa u saxiixday Amina Ali, agaasimaha xarunta Warbixinta Maaliyadeed. Halka Bangaladesh uu u saxiixay Abu Hena Mohammad, madaxa sirdoonka maaliyadda Bangladesh.
Cali Faysal Ba'Alawi, Madaxa Waaxda Sirdoonka Maaliyadeed ee Imaaraatka, ayaa sheegay heshiisyadan ay la galeen Soomaaliya iyo Bangladesh in ay dib u soo celinayaan dadaalkooda ka hortagga dambiyada maaliyadeed iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya Imaaraadka, Bangladesh iyo Soomaaliya.
Dalka Imaaraatka Carabta ayaa lagu tiriyaa inuu kamid yahay dalalka safka hore kaga jira dambiyada lacagaha la dhaqo ee afka qalaad lagu dhaho Money laundry, waxaana warbixin soo baxday sanadkii 2020 lagu sheegay in wax ka qabashada musuqmaasuqa iyo lacagta la dhaqay ee UAE ay tahay caqabad caalami ah oo ay tahay in wax laga qabto.